N’agba nke mbụ nrụrịta ụka ahụ, Romney meriri Obama, onye mega anya ụra ụbọchi ha nwere yabụ nrụrịta ụka n’abalị 3 nke ọnwa ọkụtoba a.
Ụnyahụ, onye isi ala mba Amerịka, bụ Barack Obama, na Mitt Romney, onye ji aha ndị otu Rịpọlikan azọ ọkwa onye isi ala mba ahụ, nwere nrụrịta ụka. Nke a mere ka o mechera izu ụka abuọ ha abụọ nwere agba nke mbụ nrụrịta ụka ahụ na mahadum Steeti Denver, na Nwenezdee, abalị 3 nke ọnwa ọkụtoba afọ 2012.
N’agba nke mbụ nrụrịta ụka ahụ, Romney meriri Obama, onye mega anya ụra ụbọchi ha nwere yabụ nrụrịta ụka n’abalị 3 nke ọnwa ọkụtoba a. N’agba nke abụọ ya ha mere ụnyehụ, Obama jiri anya nwoke ji anyụ nsị pụta. O gosiri Romney na nwata bulie nna ya elu, ọgọdọ nwụchie ya anya. Ndị nta akụkọ na ndị okwu na-adị mma n’ọnụ kwuru na Obama meriri Romney n’agba nke abụọ nrụrịta ụka ahụ.